Hiverina eny an-tsena i Palm amin'ny alàlan'ny fitaovana vaovao amin'ny taona 2018 | Androidsis
Afaka niverina teny an-tsena i Palm tamin'ny alàlan'ny fitaovana vaovao tamin'ny taona 2018
Elvis bucatariu | | Finday, About us
Palm dia anarana iray izay miteraka nostalgia sasany amin'ireo maro izay liana amin'ny haitao tamin'ny taona 90 sy 2000. Nisy ny tatitra vaovao navoakan'ny orinasa vaovao TCL dia mikasa ny handefa fitaovana vaovao eo ambanin'ny marika Palm indraindray amin'ny taona 2018.
Nandritra ny foara IFA 2017, TCL Marketing Manager Stefan Streit dia nilaza fa miomana amin'ny famoahana vokatra Palm vaovao amin'ny taona ho avy ny orinasa. Na izany aza, tsy nety nilaza izy hoe karazana fitaovana inona no ho tonga miaraka amin'ity anarana ity.
Nalefa tamin'ny 1992, Palm Corporation tamin'ny voalohany dia namoaka fitaovana finday kely toa ny PDA Pilot an'ny Palm, izay mpialoha làlana an'ny mpanampy nomerika manokana momba ny finday avo lenta. Ho fanampin'izany, ny orinasa dia namolavola ny rafitra fikirakirany manokana ho an'ny PDA, antsoina Palm OS. Rehefa hitan'ny orinasa fa tsy ampy fahombiazana nilainy tamin'ny taona 2000 ny fitaovana dia nanomboka namolavola finday avo lenta feno finday izay misy sehatra vaovao miasa antsoina hoe webOS.
Na izany aza, ny varotra finday finday avo lenta, toy ny Pre, dia tsy ampy hifaninanana amin'ny iPhone sy ny fitomboan'ny isan'ny fitaovana Android.
Tamin'ny taona 2010, HP dia nividy Palm, fa ny takelaka sy finday avo lenta navoakan'ity marika ity miaraka amin'ny rafitra fikirakirana webOS dia loza. Izany dia nitarika ny HP hivarotra ny fitaovana webOS sy ny ao anatiny LG tamin'ny 2013, ary ny marika Palm a TCL ao amin'ny 2014.
Hatramin'ny 2014, TCL dia tsy nanao na inona na inona tamin'ny anarana Palm, fa ankehitriny dia toa miomana ny handefa vokatra vaovao amin'ity orinasa ity ny orinasa. TCL dia efa mampiasa ny anarana Alcatel hivarotra finday avo lenta any Etazonia sy ny tsena hafa, ary tamin'ny 2016 dia nividy ny zony hamolavola sy hamokarana finday BlackBerry. Ny fitaovana BlackBerry voalohany, nantsoina BlackBerry KEYone, navotsotra tamin'ity taona ity, ary amin'ny volana oktobra dia hahita finday BlackBerry vaovao isika.
Na dia toa vahoaka be taona kokoa aza ny marika Palm, dia mety mbola tsy naheno an'io ny mpividy tanora smartphone sy gadget hafa. Mbola manantena ihany koa izahay hianatra momba ny karazana vokatra kasain'ny TCL hatomboka amin'ity marika ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Afaka niverina teny an-tsena i Palm tamin'ny alàlan'ny fitaovana vaovao tamin'ny taona 2018
Ny Instagram dia manala ny fameperana mahasosotra indrindra amin'ny sehatra misy azy